किन पच्दैन खाना ? अपचले निम्त्याउने केहि रोगबारे जानिराखाैँ - ज्ञानविज्ञान
हाम्राे चाडपर्वकाे विशेषता मिठो मसिनो खाने हो । यतिबेला माछा-मासु खाइन्छ । कतिले मदिरापान गर्छन् । घर-घरमा भोज हुन्छ ।
चाडपर्वकाे वाहनामा हामी मनलाग्दो खानेकुरा खान्छौं । यतिबेला खानपानमा सर्तकता अपनाइएन भने अपचको समस्या हुनसक्छ ।
किन पच्दैन खाना
त्यसै त खाना राम्रोसँग नपच्ने आम समस्या बन्दै गएको छ । कहिले काहीँ बढी खानु पनि समस्या बन्न सक्छ । चिल्लो, मसलेदार र गलत तरिकाले खानेकुरा सेवन गर्दा खाना राम्रोसँग पच्दैन ।
यतिमात्र नभएर कलेजोमा भएका सबै इन्जाइमले राम्रोसाग काम नगरेको अवस्थतामा अपचको समस्या हुन्छ । जसले निकै दुख दिने गर्छ । ग्यासट्राइटिस, पोट पोल्ने, एसिडिटीलगायत समस्या अपचका लक्षण हुन् । पाचन प्रणाली प्रक्रियामा थुप्रैप्रकारको रोगबाट ग्रसित हुनुपर्छ ।
लाग्छ यस्ता रोग
यसकारण पेटमा समस्या
हाम्रो सम्पूर्ण स्वास्थ्यको नियन्त्रण पाचन प्रक्रियामा निर्भर हुन्छ । कलेजोको मेटावोलिज्मको बायप्रंोडक्टको रुपमा पित्तले काम गर्छ । यदि यसले उल्टो असर देखाएमा कब्जियतको समस्या हुन जान्छ । कब्जियतको कारण शरिरमा विषालु तत्वको मात्रा बढेर जाने गर्छ ।
भोजनमा फाइवरको मात्रा कम हुभएमा चिनीको मात्रा बढी भएमा पाचनसम्बन्धि समस्याा आउन सक्छ ।
पोषण तत्वको कमी र उच्च क्यालोरीयुक्त आहारले पनि शरिरमा नराम्रो वयाक्टेरियाको मात्रा बढेर जान्छ । जसले गर्दा आन्द्राको कममा पनि क्षती पुग्न जान्छ ।
पाचन प्रक्रियामा बाधा उत्पन्न गर्ने औषधीको बढी प्रयोगले पनि अपचको समस्या सामना गर्नुपर्छ । एस्पिरिन र पि्रलोसेकजस्ता औषधीको अत्याधिक सेवनले पाचन प्रणालीलाई विगार्ने काम गर्छ ।
पारा र मोल्ड टाक्सिनको मात्राले पनि पाचन प्रक्रियालाई विगार्ने काम गर्छ ।
तनावको कारण पनि नर्व सिस्टममा असर पुग्न जान्छ । जसले पाचन प्रक्रियालाई विगार्ने काम गर्छ । यसको साथै पेटमा व्याक्टेरियाको सन्तुलन पनि विग्रेर जाने गर्छ ।
पाचन प्रक्रिया र व्याक्टेरिया
हाम्रो पेटमा ब्याक्टेरियाका पाँच सय प्रजाति हुन्छन् । जसले खानालार्य पचाउनको लागि मदत पुर्‍याउँछ । यसका साथै व्याक्टेरियाले हार्मोनलाई सन्तुलनमा राख्ने, टाक्सिनलार्य वाहिर निकाल्ने र भिटामिनलगायतका तत्वको निर्माणमा पनि सहायोग पुर्‍याउने गर्छ । जसले पाचन प्रक्रिया र स्वास्थ्य स्वस्थ रहने गर्छ ।
यदि स्वास्थ्यमा प्यारासाइट्स वा यीस्ट जस्ता नकरात्मक व्याक्टेरियाको मात्रा बढेमा, ल्याक्टोवासिलन वा विफिडो ब्याक्टेरियाले राम्रोसँग काम नगरेको अवस्थामा पनि स्वास्थ्य विग्रदै जान्छ ।
खाना अपच भएमा प्रयोग गर्नुपर्ने घरेलु उपचार
खाना राम्रोसँग पच्दैन भने खाँदाखेरि बेस्कन चपाएर खाँदा पाचन राम्रो हुन्छ ।
पाचन बलियो नहुनुको मतलब तपाईंको कलेजो त्यति स्वस्थ छैन । त्यसैले मजिराजन्य पदार्थ छुँदै नछुनुस् । पाचन प्रणालीका लागि यो विषतुल्य हुन्छ ।
गाजर, चुकन्दर, सागसब्जी र फलफूलजस्ता कलेजोलाई स्वस्थ बनाउने खाना हरेक दिने खाने बानी बसाल्नुपर्छ ।
पाचनशक्ति कमजोर हुनेहरूको शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन्छ । यसले पाचनक्रियालाई समेत असर गर्ने भएकाले पानी प्रशस्त पिउने गर्नुपर्छ ।
बढी तनाव लिनुभयो भने पनि पेट ढुस्स फुल्ने, खाएको नपच्ने आदि हुन्छ । तनावले मन र दिमागलाई मात्र होइन, पाचनलगायत शरीरका समग्र प्रणालीलाई नै असर गरिरहेको हुन्छ ।
त्यसैले तनाव कम गर्न योग, प्राणायाम, ध्यान आदि गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।
हरेक दिन घ्यूकुमारीको जुस अथवा अमला खाने गर्नाले पाचनशक्ति बलियो हुन्छ ।
अदुवाको एउटा टुक्रामा केही थोपा कागतीको रस र अलिकति बिरे नुन मिसाएर खाने गर्नुस् ।
पुदिना, धनियाँ, हरियो खुर्सानी, अदुवा, कागतीको रस आदि मिसाएर बनाएको ताजा अचार खानासँग खाने गर्नाले पाचनशक्ति बलियो हुन्छ ।
मनतातो पानीमा मह र कागतीको रस मिसाई खाली पेटमा खाने गर्नाले अपचको समस्या क्रमशः कम हुँदै जान्छ ।
प्रकृतिले मौसम अनुसार विभिन्न अन्न-उत्पादन दिएको छ । जाडो वा गर्मी उत्पादन हुने अन्न, फलफूल, सागसब्जीले हामीलाई त्यही मौसममा हुनसक्ने संभावित समस्याबाट बचाउँछ । बाषिर्क चक्र अनुसार नै विभिन्न फल, अन्न, सागसब्जी उत्पादन हुन्छ । यसरी मौसमी रुपमा प्राकृतिक रुपले उत्पादन भएका खानेकुराले शरीरमा आवश्यक पोषक तत्व प्रदान गर्छ ।
हरेक ऋतुका लागि सोहि अनुसारको खानेकुरा प्रकृतिले दिएको छ । यसरी प्राकृतिक रुपमा उत्पादन भएको मौसमी खानेकुराले हामीलाई संभावित रोगबाट बचाउँछ ।
आवश्यक छ भोजनको नियम
भोजन गर्नुको उदेश्य केवल भोक मेट्नु मात्र होइन । यसको प्रभाव तन, मन एवं मस्तिष्कमा पर्छ । के भनिन्छ भने, गलत ढंगले आर्जन गरेको भोजनले मनलाई दुषित गर्छ ।
त्यस्तै, तारेको, भुटेको, मसलेदार, बासी, एवं गरिष्ठ भोजनले मस्तिष्कमा काम, क्रोध, तनाव आदि पैदा गर्छ । पाचन यन्त्रलाई पनि खराब गर्छ । भोक लागेको भन्दा धेरै कम र धेरै बढी खानेकुराले शरीरलाई रोगग्रस्त बनाउँछ ।
भोजनले उर्जाका साथै सप्त धातु -रगत, मासु, छाला, हड्डी आदि) पुष्ट हुन्छ । केवल खाना खाएर मात्र उर्जा मिल्दैन । खाना खाएपछि त्यसलाई पचाउने क्षमता पनि हुनुपर्छ । पाचन क्षमताका लागि सुपाच्य, स्वस्थ्य, पोषिलो खानेकुरा आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै, शारीरिक सक्रियता पनि चाहिन्छ । नियमित व्यायामको खाँचो हुन्छ ।
विहान १० बजे घडि हेर्दै भन्छौं, ‘अहो दश बजिसकेछ अब त खाना खानुपर्छ ।’ अनि अलि विहानको समयमा भन्छौं, ‘बल्ल सात बजेको छ के खाना खानु यत्ति छिटो ?’
साथै- यसरी घटाउन सकिन्छ कोलेस्ट्रोल
राती अबेर खाना खानुहुन्छ ? यस्ता रोग लग्न सक्छ
१. राती अबेर खाना खाएर तुरुन्त सुत्दा खाना बोसोमा बदलिन्छ । यसले मोटोपनको समस्या हुन्छ ।
२. राती अबेर खाना खाँदा मोटोपन बढ्छ । यसले ब्लड शुगर लेबल बढाउँछ । र, मधुमेह निम्त्याउन सक्छ ।
३. राती अबेर खना खाँदा खाना राम्ररी पच्न पाउँदैन । यसले गर्दा अपचको समस्या हुनसक्छ ।
४. राती खाना खाएर तुरुन्तै सुत्दा खाना फुड पाइमा आउँछ । यसले गर्दा निन्द्रा नलाग्न सक्छ ।
५. दिनहुँ राती अबेर खाना खाँदा शरीरमा कोलोस्टोर बढ्छ । यसले हृदय रोगको खतरा बढाउँछ ।
६. राती अबेर खाना खाँदा राम्ररी निन्द्रा पुग्दैन । यसले आफ्नो कार्य क्षमता घटाउँछ साथै तनाव पनि बढाउँछ ।
७. नियमित जसो राती अबेर खाना खाने बानीले उच्च रक्तचाप निम्त्याउन सक्छ ।
खाना खादा के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुदैन ?
हामीले खाएका हरेक कुराहरुले हाम्रो जीवनमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । खाएका वस्तुहरु धेरै मलमूत्रको रुपमा निश्कासन भए पनि त्यसको रसहरुले हाम्रो शरीर बढ्ने र शक्ति दिने गर्दछ । यही खाएको वस्तु अनुसारको नै बुद्धिको विकास हुने गर्छ । त्यसकारण बुद्धि भ्रम गराउने नशालु वस्तुहरु खानको लागि आयुर्वेद आदिमा निषेध गरिएको छ ।
१. खाना खाँदा बोल्नु हुँदैन । जुत्ता चप्पल लगाएर, उठेर, नराम्रा कुराहरु हेर्दै र सुन्दै खाना खानु हुँदैन ।
२. दक्षिण दिशातर्फ फर्केर खाना खान हिन्दुधर्म ग्रन्थहरुमा निषेध गरिएको छ । दक्षिण दिशातिर फर्केर खाएको खानाले शरीर र स्वास्थ्यमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरु दिने गर्दछन् । त्यसकारण सकेसम्म खाना खाँदा पूर्व वा उत्तरतिर फर्केर नै खानुपर्छ । पश्चिमतिर फर्केर खानुलाई पनि ठिकै मानिएको छ ।
३. आयुर्वेदमा खाना खानु भन्दा ठीक अघि पछि र खाना खाने समयमा पानी खानु हुँदैन भनेको छ । खाना खाँदा पानी पिएमा त्यसले विषको काम गर्छ भन्ने मान्यता छ । यस कुरालाई भौतिक विज्ञानले पनि स्वीकारेको छ ।
४. खाना खाइसकेपछि बज्र आसनमा बस्नाले खाएको कुराहरु पच्दछ । खाना खाएपछि १०० पाइला हिँड्नाले शरीरलाई अनावश्यक मोटो हुन दिँदैन भन्ने कुरा आयुर्वेदमा भनिएको छ ।
५. खाने बित्तिकै सुत्यो भने अनेक प्रकारका रोगहरु लाग्छन् । मोहीले पाचन क्रियालाई मजबुत बनाउने भएकाले खाना खाएपछि मोही खानु उत्तम हुन्छ । खानेबित्तिकै ध्यान गर्न, व्यायाम गर्न, शरीरमा तेल लगाउन हुँदैन।
६. चुठेपछि चिसो हातले आँखामा स्पर्श गर्नाले आँखा तेजिलो हुन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ । खाना सकेसम्म चरेशको थालमा खानु उत्तम हुन्छ ।
७. आफूले नसक्ने खाना जुठो लगाएर फाल्नु हुँदैन, यसो गर्नाले घरमा दरिद्रता लाग्दछ भनिन्छ । नरुच्ने र नपच्ने खाना खानु हुँदैन । महर्षि चरकले दीर्घ जीवनको लागि कम खाना खानु भनेका छन् ।
८. यज्ञवल्क्यका अनुसार पेटको पाँच भागमध्ये तीन भाग अन्न, एक भाग पानीले भर्नुपर्छ भने एक भाग हावाको लागि खाली नै राख्नुपर्छ । यसरी भोजन गर्ने मानिस पेटका रोगहरुबाट पीडित हुनुपर्दैन र उसले स्वस्थ र शान्तसँग आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्दछ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ ।
Don't Miss it तरकारीमा दैनिक बेसार प्रयोग गर्नुहुन्छ ? टंसिल भएमा बेसारको प्रयोग गर्नुहोस् – जानुहोस् यसका फाइदाबारे
Up Next यस्ता छन् गर्मीमा स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्ने उपयोगी तरकारी
मांसपेशी बाउँडिने अथवा फर्कने कारणहरु यस्ता छन्
रक्तसञ्चार राम्रे नभएमाः शरीरमा रक्त सञ्चार राम्ररी नभएमा पनि मासु बाँउडिने गर्दछ । यसको रोकथामका लागि उक्त भागलाई कस्ने भन्दा…
यस्ता छन्, जाडोमा हात फुटेमा प्रयोग गर्ने उपाय
– राती सुत्नुअघि कुनै राम्रो गुणस्तरको मोश्चराइजर लगाउँनुस् । दिनमा कम्तीमा पनि चारपटक मोश्चराइज क्रिम प्रयोग गर्नुपर्छ । – जाडो…
चिसोबाट बच्न यसो गर्नुहोस्
खानेकुरामा ध्यान दिऔं भुजिया नमकीन मिठाई विभिन्न पेय पदार्थहरुमा धेरै मात्रामा चीनी, बोसोजन्य पदार्थ र सोडियम जस्ता मानव शरीरलाई नोक्सान…
यस्ता छन्, सुत्नुअघि नुहाउँदाका फाइदा
गहिरो निद्रा नुहाउँदा शरीरको तापक्रम सामान्य हुन्छ । जसले तपाईंलाई गहिरो निद्रा आउँछ । धेरै अध्ययनमा बताइएको छ कि सुत्नुभन्दा…
यस्ता गल्ति खाना खाने बित्तिकै गर्नुहुदैन
खाना खाने बित्तिकै धुम्रपान गर्ने ब्यक्तिलाई ग्यास्ट्राइटिसको समस्या निम्त्याउँछ र पेटसम्बन्धी रोगहरु उत्पन्न गराउँछ । खाना खाएको तुरुन्तै फलफूलको सेवनले…